- सिबी अधिकारी काठमाण्डौ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले मङ्सिर महीनाको अन्तिमदेखि चीनको ग्वोञ्जाओ उडान गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयको प्रयासपछि निगमले ग्वोञ्जाओ उडान अनुमति पाउने सुनिश्चित भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको हवाई उद्योग व्यवस्थापन...
काठमाण्डौ । छिमेकी मुलुक चीनले आफ्नो पहिलो चारसिटे इलेक्ट्रिक विमानको सफल परीक्षण उडान पूरा गरेको छ । इलेक्ट्रिक विमानको पहिलो परीक्षण उडान गत मंगलबार गरिएको थियो । यो विमान १२ सय किलो तौल र ८.४ मिटर लामो छ । यसको पखेटा (विङ्ग्स) १३.५ मिटरको छ । यो विमान एकपटक फुल चार्ज गर्दा ३०० किलोमिटरको उडान भर्न सक्छ । यो विमानले एउटा उडान ९०...
विश्वमै पहिलोपटक लामो दूरी र समयको हवाई उडान, कति छ दूरी र समय ?
काठमाण्डौ । अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा रहेको क्वान्टस एयरवेजले हवाई क्षेत्रमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा लामो दूरी र समयको उडान परीक्षण गरेको छ । क्वान्टस एयरवेजले विश्वमै सबैभन्दा लामो दूरी र समयको उडान अमेरिकाको न्युयोर्कबाट शुक्रबार परीक्षण उडान गरेको हो । यो विमान करिब २० घन्टा ननस्टप उडान भर्नेछ । यो तीन निर्धाैरित परीक्षण उडानको पहिलो...
तलबवृद्धि र पदोन्नतिको माग पूरा नभएपछि एयर इन्डियाका १२० पाइलटद्वारा सामूहिक राजीनामा
काठमाण्डौ । तलबवृद्धि र पदोन्नतिको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत एयर इन्डियाका १२० जना पाइलटले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । एयर इन्डियाको एयरबस ए–३२० मा कार्यरत पाइलटहरुले आफ्नो तलबवृद्धि र पदोन्नतिको माग पूरा नभएपछि सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । केन्द्र सरकारबाट भारु ६० हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जामा फसेको यो सरकारी विमान कम्पनीको...
आकाशमै इन्जिन फेल भएको इन्डिगोको जहाज दुर्घटनाबाट बच्यो, २०० यात्रु सुरक्षित
काठमाण्डौ । भारतको गोवाबाट नयाँदिल्लीतर्फ उडेको इन्डिगो एयरलायन्सको विमानको इन्जिनमा समस्या आएपछि गोवा विमानस्थलमै आपतकालीन अवतरण गरिएको छ । विमानमा करिब २०० जना यात्रु सवार थिए । इन्डिगोको ६ई–३३६ विमान सोमबार बिहान गोवाबाट उड्नासाथ पाइलटले इन्जिनमा समस्या आएको पत्ता लगाएका थिए । पाइलटले तत्कालै उक्त जहाज गोवाकै डाबोलिम...
– सिबी अधिकारी काठमाण्डौ । नेपाल र चीनको संयुक्त लगानी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने निजी वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले आगामी कात्तिक महिनादेखि चीनको राजधानी बेइजिङलगायत मुख्य शहरमा उडान गर्ने भएको छ । चीनका गन्तव्यमा उडान भर्नका लागि लामो समयदेखि प्रयासरत कम्पनीले बेइजिङ, चाङ्सा, नाङचाङ, गुइयाङ, चोङकिङ, अलि र शेन्जेङमा...
काठमाण्डौ । हवाईयात्रा गर्दा पहिले टिकट बुकिङ गर्नुपर्छ । यसको मतलब हवाई भाडा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । हवाईयात्रा गर्नुअघि हामीले कहिले बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ कि हवाईभाडामा कुन–कुन शीर्षकमा शुल्क लिन्छ ? प्रायः हामी बुझ्ने कोसिस गर्दैनौ । आउनुहोस् हवाई भाडामा जोडिने विविध शुल्क शीर्षकका विषयमा चर्चा गरौँ । अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटमा...
काठमाण्डौ । युरोपको सबैभन्दा ठूलो हवाई कम्पनी एयरबसमाथि ह्याकरहरुले शृङ्खलाबद्ध साइबर आक्रमण गरेको विवरण चोरीको प्रयास भएको छ । आक्रमणकारीले मुख्यतया एयरबसका आपूर्तिकर्ताको विवरण चोरी गर्न खोजेका थिए । एयरबसका सुरक्षा विज्ञहरुका अनुसार आक्रमणकारीहरु चिनियाँ नागरिक रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ह्याकिङका बारेमा...
काठमाण्डौ । नेपालको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । एउटामात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सानो हुँदा प्रायः आकाशमै विमानको ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा घन्टौँसम्म विमानहरु आकाशमै होल्ड हुने गरेका छन् । पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिरहेका छन् । निजगढमा...
काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रको वायु सेवा प्रदायक कम्पनी श्री एयरलाइन्सले ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । दसैँ, तिहार तथा छठका अवसरमा कम्पनीले ज्येष्ठ नागरिकलाई आन्तरिक उडानमा उक्त छुटको घोषणा गरेको हो । घटस्थापनादेखि लागू हुनेगरी ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने छुट इन्धन र करबाहेकको भएको कम्पनीका...
आजबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५०% छुट
काठमाण्डौ । ज्येष्ठ नागरिकले बुधबारदेखि हवाईसेवामा ५० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमले बुधबारदेखि लागू हुने गरी आन्तरिक हवाई भाडामा ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई...
काठमाण्डौ । भारतीय निजी एअरलाइन्स कम्पनी इन्डिगोको गम्भीर लापरबाहीका कारण यात्रुले ठूलै झमेला व्यहोर्नुपरेको छ । गत आइतबार इन्डिगो एअरलाइन्सको जहाज भारतको नयाँदिल्लीबाट टर्कीको राजधानी इस्तानबुल उडेको थियो । विमानमा सवार १३० यात्रु इस्तानबुल त पुगे तर उनीहरुको सामान भने दिल्लीमै छुट्यो । इन्डिगो एअरलाइन्सको गम्भीर लापरबाहीले...
काठमाण्डौ । विगत चार दिनदेखि खराब मौसमका कारण अलपत्र परेका पर्यटकलाई सोलुखुम्बुको लुक्लाबाट बोकेर काठमाडौं आउँदै गरेका सातवटा हेलिकप्टर मंगलबार बिहान काभ्रेको पाँचखाल र सिन्धुलीको नेपालथोकमा आकस्मिक अवतरण गरेका छन् । सोलुखुम्बुमा अलपत्र पर्यटक बोकेका आठवटा हेलिकप्टरमध्ये सातवटाले मौसम खराब भएपछि सिन्धुली र काभ्रेमा आकस्मिक...
– रमेश लम्साल काठमाण्डौ । सरकारले गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण गर्ने विमान कम्पनीलाई थप सुविधा दिने भएको छ । हाल भौतिक निर्माण करीब ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको सो विमानस्थलाई सन् २०२० को जनवरीदेखि व्यावसायिक उडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल निर्माण कार्य युद्धस्तरमा जारी रहेको सो विमानस्थललाई थप व्यावसायिक बनाउने र...